Gear Engineering INTECH wuxuu leeyahay khibrad ballaadhan injineernimada maareynta iyo naqshadeynta, waana sababta ay macaamiisha noogu soo dhowaadaan markay raadinayaan xal u gaar ah baahidooda gudbinta. Laga soo bilaabo Waxyi ilaa Ogaansho, waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa kooxdaada si aan u siino khibrad injineernimo khibrad ...
Taxaddarrada warshadaha Gearmotors iyo alaab-qeybiyeyaasha
Range Heerkulka kala duwan ee la isticmaali karo: Matoorrada korontada ku shaqeeya waa in loo adeegsadaa heer-kulka -10 ~ 60 ℃. Tirooyinka lagu sheegay qeexitaanka buugga waxay ku saleysan yihiin adeegsiga heerkulka qolka caadiga ah qiyaastii 20 ~ 25 ℃. Range Heerkulka kala duwan ee keydinta: Mashiinnada koronto ku shaqeeya waa in lagu keydiyaa heer kul ah -15 ~ 65 ℃ .In ...
Waxaa jira noocyo badan oo isku-xidhka ah, oo loo qaybin karo: (1) Isku-xidhka go'an: Waxaa inta badan loo adeegsadaa meelaha loo baahan yahay in labada fallaadh ay si adag xuddun u ahaadaan oo aanu jirin wax barokac ah oo qaraabo ah inta lagu jiro hawlgalka. Qaab dhismeedka guud ahaan waa mid fudud, fudud in la soo saaro, iyo ...
Gearbox si ballaaran ayaa loo adeegsadaa, sida marawaxadaha dabaysha. Gearbox waa qayb farsamo muhiim ah oo si ballaaran loogu isticmaalo marawaxadaha dabaysha. Shaqadeeda ugu weyni waa inay u gudbiso awooda ay dhaliso giraangirta dabaysha hoosteeda ficilka awooda dabaysha koronto-dhaliye oo ay ka dhigto inay hesho xawaaraha wareega ee u dhigma Caadiga ah ...